isityumzi igalelo hydraulic
roll isityumzi double
nemibhobho eqokelela uthuli
Siza Yenza Advanced Cone Crushers ukuba Sihluthise Customers ukwaneliseka abathengi 'yimfuneko esisiseko nayimfuneko emarike kunye inkampani yethu babambelele kulo mgaqo iminyaka, kususela kwimini eyasekwayo. inkampani yethu bonke abasebenzi bethu baya kuza
Mobile Impact isityumzi Overview
Yintoni umgca wokwenza isanti
Ukusetyenziswa kwamatye okutyumba
Mobile lokutyunyuzwa Station Aluncedo Projects Infrastructure
Qha Uhlobo Mobile Crushers ukwenza bhetele
Umhlathi Crushers bangasebenza Ubushushu Obuphantsi
Siza Yenza Advanced Cone Crushers ukuba Sihluthise Customers
Working Way of Tarzan Sand Ukwenza Plant
About Tarzan Machinery
Tarzan (Shanghai) Oomatshini Technology Co., Ltd ngumvelisi ezinkulu ishishini ziquka izixhobo R & D, imveliso, atsho lokuthengisa izixhobo, eyomileyo izixhobo isanti lokuvelisa kunye ukhuselo lokusingqongileyo izixhobo mveliso. efektri yethu ibekwe Fengxian District, Shanghai, China. Sinawo mvume kwelungelo zoshishino Rhweba ngaphakathi no Rhweba, kwaye sifumana izitifiketi ISO9001: 2000 kwaye ukufikelela ezifana AAA yophawu edumileyo, njl-mveliso wethu kuphela yabanini crushers eqhelekileyo kwemihlathi, crushers ifuthe, eshukuma screens, kodwa unako ukuvelisa izixhobo lokuqala-class ezifana euro-style crushers umhlathi / crushers impembelelo yeyuro-style / compound crushers cone / crushers cone yiHydraulic / umatshini inkqubo TVSI isanti zakutshanje njalo njalo.
Tarzan na inkqubo yolawulo lomgangatho egqibeleleyo, eqokelelwe abanye phambili ubugcisa kunye ukuqalisa ukuba kubaxhasi bethu yaye sinikeze ngazo iimveliso eziphezulu. Sibonelela inkonzo epheleleyo kubathengi iquka ukuyila, ukuthengisa, izixhobo kungasebenzi kunye nolondolozo. Eziqeshe Abasebenzi phezulu, ekusekeni inkampani phezulu, bedala brand phezulu, nokunika inkonzo phezulu, senza konke okusemandleni ethu ukuba inkampani yethu ukuba ibe phezulu e-China. Tarzan usoloko kunikhumbuza "ukunyaniseka, umgangatho ophezulu & kwiklasi yokuqala" xa uthengisa izixhobo zethu okanye ukunikela inkonzo yethu. Ngale ndlela sinako ukuhlangabezana nemfuno ngumthengi ngokuya ezahlukeneyo kunye nokudala ixabiso ngakumbi kubasebenzisi.
Papua New Guinea isityumzi sayithi imephu mobile
Algeria 300 t / h site ufakelo ilitye isityumzi izityalo
iitoni 500-800 of line yemveliso ilitye
indawo yokufaka umgca wemveliso Gansu
compound cone isityumzi
Njengokujikeleza motor iqhutywa bushing lukhuni nge wheel ibhanti, nokuhlangana, ukudluliselwa shaft isixhobo cone ukulujikeleza macala kwizikhondo ezisisigxina. Udonga elihlazo crushers cone uhamba k...
Isityumzi roll kabini
Ukuthiwa isityumzi obumbaxa kunye ratio enkulu ekunciphiseni, umthamo omkhulu, ingxolo phantsi, ukungcangcazela encinane, ngaphantsi uthuli, ukusetyenziswa amandla, umzila ezincinane, ulondolozo lula ...
I-cylinder eyodwa cone hydraulic isityumzi
Single Isilinda fracturing Cone isityumzi lamkela udibaniso ilungileyo yokuwela oluqukuqelayo kunye eyinqaba, ubukhulu bayo imveliso otyunyuziweyo lincinane kakhulu. Ityumza yaye isila ukusetyenziswa ...
Tarzan Machinery sidume hydraulic impembelelo isityumzi umenzi eTshayina, kwaye isityumzi nefuthe kubunzulu eziveliswa Tarzan unani ubugcisa ukuyila, isakhiwo indawo, ukumelana othukile, ukukwazi ityu...
Imihlathi isityumzi ngesanti kubunzulu baphantsi nayo ngokuba umlomo tiger. Tarzan bemihlathi isityumzi lisetyenziswa ukuba yaphule imbudumbudu eliphakathi nendawo ekrwada ezahlukeneyo kunye nezinto u...
bekukubi Umatshini isanti somhleli uhlobo olutsha lwe somhleli oluphuhliswe Tarzan ngokwe indlela abathengi kunye neemfuno. Kusoloko kusetyenziswa kunye ungumqokeleli uthuli ngaphandle Motors. It liku...
isanti kunye umahluli powder isekelwe umahluli uhlobo plane leyo zaphengululwa zobunjineli Silicate Institute of Beijing University of Technology, ihlabathi ukufunxa phambili eyahlula ubugcisa....
Isanti wheel iqhoshana, isanti kumatshini wokuhlamba okanye wokuhlamba isanti izixhobo ibhekisa uhlobo emele wokuhlamba isixhobo uyakwazi ukucoca, zibakhethe umgubo iliwa lodongwe intlabathi namatye. ...
somhleli Ukonakala okanye ezijikeleze na umatshini enye nemigodi ezisetyenziselwa imveliso ekrwada yokuxhela, ezenze esebenzisa komyinge kwamasuntswana eqinileyo kwaye sisixhobo se grading mechancal k...
Isityalo esityhutyhayo esithwabileyo
Isityalo saseChina esinekrushhe yefowuni yindlela entsha entsha yokuchithwa komatshini kunye nokuveliswa kwenkunkuma yendawo yokusetyenziswa yokutshatyalaliswa kwidwala, enokuthi ibe namandla okunyusa...
Isityalo lokutyunyuzwa mobile irabha-tyred njenge uhlobo of mobile umatshini atsho, lisetyenziswa kwi mveliso imigodi atsho, ukwakhiwa kwenkunkuma, ukuveliswa kwenkunkuma yokwakha, uhola wendlela kuny...
I enkulu nendawo ukubetha jet ibhegi lokucoca ikakhulu ukujongana yanikwa yeegesi ezinothuli, ezifana isityalo amandla, intsimbi, non-ayoni yezityalo metal lokunyibilikisa, izixhobo zokwakha, yayidliw...
Iskrini ngeenxa eshukuma okanye setyhula screen neentshukumo yindlela esebenza screen eliphezulu eshukuma ngeengcamba ezininzi. ISETYHULA screen neentshukumo yamkela lombhobho lukhuni shaft exciter ku...
Yifowuni (isithethi IsiNgesi): +86-13795222925